CHU Mahavoky Atsimo-Mahajanga: ho lasa hopitaly goavana afaka fotoana fohy | Région Boeny
Afaka telo volana dia ho lasa hopitaly goavana ny CHU Mahavoky Atsimo, raha tratra ny tanjona fanatsarana nokendrena aminy hoy ny Ministry Fahasalamana, Atoa Mamy Lalatiana Andriamanarivo nandritry ny lanonam-panolorana fitaovam-pahasalamana nataony teto Mahajanga, ny zoma 10 febroary 2017.
Fiara fitaterana marary sy fitaovana fanatsarana ny ao anatiny no natolony ny CHU Mahavoky Atsimo na ny Hopitaly Manara-penitra teo aloha. Fitaovam-pitiliana «échographie portable» kosa ho an’ny CSBII Mahabibo. Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny firenena kanadianina izao fanolorana fiara fitaterana marary izao ary ny renivohi-paritany rehetra dia samy nahazo araka ny fanazavan’ny Ministra.
Anisan’ireo fanatsarana ho tratrarina ho atao ao amin’ny hopitaly CHU Mahavoky Atsimo ankoatra izay ny fananganana sampandraharaha vonjy aina sy ny fanatsarana ny sampam-piofanana ho an’ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy hoy ihany ny Ministra.
Nitsidika toeram-pitsaboana samihafa ny tenany, anisan’izany ny CSBII Mahabibo izay nahatsapany fa mitandrina fahadiovana sy mirindra tsara ny asan’ireo mpiasan’ny fahasalamana ao. Taorian’izay dia ny trano vaovao ho toeram-pitsaboana ireo zaza tsy ampy taona tratry ny fanolanana avy eny amin’ny fiaraha-monina izay efa vita orina fa miadnry fitokanana ao amin’ny CHU PZaGa Androva no notsidihany.
Ny fandalovan’ny Ministry ny Fahasalamana toy izao dia maha-te hanantena fa hisy ny fihatsarana eo amin’ny lafiny fahasalam-bahoaka hoy ny Lehiben’ny Kabinetran’ny Faritra Boeny, Atoa Hemedy. Anisan’izany ny fanatsaran’ireo mpiasan’ny fasalamana ny asany amin’ny fotoana rehetra.